The Concorde nyere anyị supersonic iga
The Concorde nyere anyị supersonic iga 3 afọ 4 ọnwa gara aga #273
Nke a ụgbọelu nwere ike ịgafe Atlantic na 3.5 awa. Gịnị mere ya afọ n'ala?
The Concorde nyere anyị supersonic iga. Ma gịnị mere a supersonic ụgbọelu ida?
Azịza ya bụ mgbagwoju anya - Vox si Phil Edwards nyochaworo.
The Concorde nyere anyị supersonic iga 3 afọ 4 ọnwa gara aga #274
The n'ezie bụ ihe mere bụ nanị afọ nke ugbo elu. 30 + afọ, na a nnukwu mmanụ ụgbọala apa ọkụ. Nnọọ siri na-emebi emebi. Dị nnọọ adabara taa ikuku njem, mgbe ụgbọelu na-arụ ọrụ n'ezie ike ime ka ego na ụgbọelu. M a nnukwu Concorde akwado, ma, ihe-eme Paris e nnọọ eche.
The Concorde nyere anyị supersonic iga 3 afọ 4 ọnwa gara aga #286
Dariussssss dere, sị: The n'ezie bụ ihe mere bụ nanị afọ nke ugbo elu. 30 + afọ, na a nnukwu mmanụ ụgbọala apa ọkụ. Nnọọ siri na-emebi emebi. Dị nnọọ adabara taa ikuku njem, mgbe ụgbọelu na-arụ ọrụ n'ezie ike ime ka ego na ụgbọelu. M a nnukwu Concorde akwado, ma, ihe-eme Paris e nnọọ eche.
N'ụzọ dị mwute, m ga-ekweta ...
Eleezie, m na-eme n'ezie ihe gburugburu na-ụwa njem ugbu a ke Concorde. Ọ bụghị n'aka otú ọtụtụ ụkwụ a ga-ewe ma ọ bụ ebe ọ na-ewere Me, ma anyị ga-ahụ
M ga-edo My Flight Atụmatụ na a ọhụrụ eri mgbe mere
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: maryap
The Concorde nyere anyị supersonic iga 3 afọ 4 ọnwa gara aga #299
Enwe tour Gentelmen!
British Airways Concorde - zuru ezu kokpiiti Tour -
Concorde, ụwa kacha mma airliner. Ịbanye na G-BOAC, na flagship nke BA si Concorde nsoro, na-enwe a zuru ezu njem nke ugbo elu nke mara mma na-analogue kokpiiti. A nzọụkwụ n'ime gara aga na Manchester ọdụ.
The Concorde nyere anyị supersonic iga 3 afọ 4 ọnwa gara aga #327
Biko ka m na-aga ịgbanwe si My na-eti ọkpọ .....
BTW, m na-akọrọ ndị vid on My onye facebook, na ịbụ ndị amadi m, m nyere unu n'aka, Colonel
DAALỤ! maka ikenye ndị vid!
The Concorde nyere anyị supersonic iga 3 afọ 4 ọnwa gara aga #341
Oge obula agbarịta!
Oge ike page: 0.239 sekọnd